याे वर्षकाे क्यान इन्फाेटेक पृथक र बिशेष हुनेछ – अध्यक्ष वास्ताेला - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २५, २०७६ समय: ३:२५:०७
याे वर्ष इटहरीमा प्रदेश स्तरीय क्यान इन्फाेटेक हुदैछ यसकाे तयारी के कस्ताे चल्दैछ ?
२ वर्षकाे अन्रालमा फेरी पनि इटहरीमा प्रदेश स्तरीय क्यान इन्फाेटेक मेला लाग्दैछ याे हाम्राे लागि गाैरवकाे कुरा हाे । हामिले फेरी पनि त्याे माैका पाएका छाै जुन स्थानीय देखि प्रदेश हुदै केन्द्र सम्मका उपभाेक्ता लगायत पर्यटकहरूलाइ शुचना प्रविधिकाे बिकास र मानव जिवनमा पुग्ने फाइदा बेफाइदा बारे जानकारी गराउन पाउनेछाै र थाेरै भएपनि ज्ञान बाडने अवसर पाउदैछाै ।
र यसकाे तयारी चै बिगतकाे वर्ष भन्दा फरक पृथक शैली अपनाएर याे पटककाे क्यान इन्फाेटेकलाइ बिशेष बनाउने हरदम प्रयास गरिरहेका छाै । यसमा म क्यान महासंघकाे अध्यक्ष मात्र नभइ सिंगाे टिम नै लागि परेकाे जानकारी गराउन चाहन्छु ।
तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाे हाे ?
तयारी करीब अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाे छ । नेपालभर हुने इन्फोटकको सुरुवात नै इटहरीबाट भइरहेको छ, यसर्थ यो सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण प्लाटफर्मको रूपमा विकास गर्ने तीव्र तयारीमा छौं । स्पोन्सर र स्टल बुकिब धमाधम भइरहेको छ ।
हामीले प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । कलेजहरूमा आइसिटी क्लब मार्फत कार्यक्रमहरू भइहेका छन् । प्रदर्शनीका स्टलसँगै ब्राण्डिङ, इन्नोभेसन, स्टार्टअपहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं ।
इन्फोटेकमा सामान खरिदविक्री मात्र बढी भयो भन्ने गुनासोलाई इटहरीको इन्फोटेकले नयाँ सन्देश देला ?
नयाँ प्रडक्टहरूको प्रदर्शनी स्वाभाविक रूपमा नै हुन्छ । हरेक समय नयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेका हुन्छन्, यसको बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक पनि छ ।यसैगरी हामीले ब्राण्डिबलाई विशेष ध्यान दिएका छौं । ठूला आइटी कम्पनीहरूले प्रोडक्ट ल्याएर विक्री गर्नेमात्र नभएर कम्पनीलाई ब्राण्डिब गर्ने स्पेसहरू पनि दिएका छौं । नयाँ इन्नोभेसन, विद्यार्थीका प्रोजेक्ट र स्टार्टअपहरूलाई छुट्टै स्पेस छुट्याएर प्रवद्र्धन गर्ने तयरीमा छौं । आइसिटी स्टार्टअप मेलाका केही स्टार्टअप, रोबोट र ड्रोनहरूलाई पनि कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिएका छौं । इन्फोटेकमा सयभन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन् । यसले गर्दा इन्फोटेक सबै हिसाबले राम्रो बनाउने प्रयास छ ।
इन्फोटेकमा किन आउने, अवलोकनकर्तालाई तपाईंको आग्रह के छ ?
नयाँ प्रविधिको जानकारी लिन, सिक्न अवश्य इन्फोटेक आउनुपर्छ । प्रविधिप्रेमीले मात्र नभएर सबै जनमानसले यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएर धेरै कुरा बुझ्ने अवसर मिल्नेछ । इटहरीसँगै प्रदेश १ का सर्वसाधारण, उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी, सरकारी अफिसर, विद्यार्थी लगायत सबैलाई इन्फोटेक अवलोकनका लागि आग्रह गर्दछु ।
(राष्ट्रिय अध्यक्षका प्रत्यासी) अशोक शंकर यतिबेला चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । पूर्वका एक सफल उद्यमीका रुपमा आफूलाई स्थापि...